Jabuuti Oo War kasoo Saartay Go’aankii ay ku Dhawaaqday Dowladda Somaliya.(Akhriso) – Heemaal News Network
Jabuuti Oo War kasoo Saartay Go’aankii ay ku Dhawaaqday Dowladda Somaliya.(Akhriso)
Dowladda Jabuuti ayaa ka hadashay Go’aankii xalay ay ku dhawaaqday dowladda Federaalka Soomaaliya oo mar kale dib ugu soo celineyso xiriirkii diblomaasiyadeed ee kala dhexeeyay dowladda Kenya oo horey dowladda Qatar u soo celisay.
Qoraal uu soo saaray Wasiirka Arrimaha Dibadda Jabuuti Maxamuud Cali Yuusuf ayaa waxaa uu kusoo dhaweeyay Go’aanka dowladda Federaalka ay ku dooneyso dib u soo celinta xiriirkii Kenya oo bilooyin kahor lasoo celiyay, balse xumaaday.
Wasiir Maxamuud Cali Yuusuf ayaa horumar weyn ku tilmaamay tallaabada ay dowladda Federaalka Soomaaliya, isagoona xusay in arrintaas ay muhiim u tahay nabada iyo xasilloonida Gobolka.
“Jabuuti waxay soo dhaweyneysaa dib u soo celinta xiriirkii diblomaasiyadeed ee u dhexeeyay Jamhuuriyadda aan walaalaha nahay ee Soomaaliya iyo Jamhuuriyadda Walaalaha ah ee Kenya. Runtii waa horumar weyn oo ka jirta gobolkeenna IGAD nabad iyo xasillooni darteed” ayuu yiri Wasiirka Arrimaha Dibadda Jabuuti.
Dowladda Federaalka ayaa ku dhawaaqday inay soo celineyso xiriirkii Kenya, iyadoo ugu baaqday Kenya inay dib u furto Safaaradeeda Soomaaliya, halka dowladda ay sheegtay inay furi doonto Safaarada ay ku leedahay Nairobi.
Kenya ayaa shaacisay inay qaaday xayiraaddii ay bishii lasoo dhaafay ee May kusoo rogtay Duulimaadyadii diyaaradeed ee tooska ahaa ee isaga kala gooshi jiray dalalka Kenya iyo Soomaaliya, kadib markii muddo bil ah ay xayirnaayeen safarada labada dal.
Wasiirka Arimaha Gudaha Oo Shaaciyay Xiliyada La Dooran Doono Maayirada Magaalooyinka Somaliland
Iran, Turkiga & Afgaanistaan Oo Isbahaysi Samaysanaya
Heemaall June 19, 2021
Ismaamulka Somalida Itobiya Oo ka Waramay Xaalada Ardayda Somalida Ee Tigrey Wax ka Barata.